अर्थ - Lite Nepal
तमोर जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्ने
विराटनगर । उर्जामन्त्रालयमा नयाँ जिम्मेवारी पाएर मन्त्री बनेकी पम्फा भुसालले प्रदेश १ मा दूधकोशी र तमोर जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेकी छिन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले प्रदेश १ मा तमोर र दूधकोशीमा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने बताएकी हुन् । उनले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र […]
विराटनगर । २७ महीनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको तरकारी तथा फलफूल बजार अलपत्र परेको छ । १४ करोड लागतमा विराटनगर महानगरपालिकासँगै जोडिएको कटहरी गाउँपालिका-१ जम्टोकीमा निर्माण भएको ‘कटहरी फलफूल तथा थोक बजार’ प्रयोग विहीन भएको हो । २०७५ चैत ३ गते ओलीले बजारको उद्घाटन गर्दै सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रण गरेका थिए […]
आन्तरिक गन्तब्यका लागि उडान संख्याको सीमा हट्यो, अब मागअनुसार उडान
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक गन्तब्यका लागि उडान संख्याको सीमा हटाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अब आन्तरिक उडानमा वायुसेवा कम्पनीहरुले आफुलाई आवश्यक संख्यामा उडान माग गर्न सक्ने भएका छन् । देशभर बाढी र पहिरोका कारण सडक यातायात अवरुद्ध भएको समयमा वायुसेवा कम्पनीले उडान संख्या थप हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सोही अनुसार सरकारले […]
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको खुल्यो सेयर, कति भर्दा ठिक होला ?
काठमाडौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणको लागि आज (असार २४ गते) बिहीबारदेखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनमा ल्याएको छ । कम्पनीले कुल जारी पूँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो। त्यसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख २२ हजार […]
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन गर्दै, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने
काठमाडौ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन गर्दैछ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्न लागेको हो । आयोजनाका प्रवक्ता डा। गणेश न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अपराह्न ४ बजे भर्चुअल माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उनका […]
मनकामनाको आइपीओ खुल्यो, कति कित्तासम्म पाइन्छ भर्न ?
काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) बिक्री खुला गरिएको छ । बिहीबारबाट बिक्री खुला भएको आइपीओ यही असार २१ गतेसम्म खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ । तीन करोड ८९ लाख बराबरको आइपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देवसिंह विष्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिकित्ता १०० […]
मोरङका धान खेती हुने फाँटमा रोपाईको दृष्य ड्रोनबाट लिदा (हेरौँ ड्रोनबाट लिएको ८ तस्विर र भिडियो)
विराटनगर । वर्षातसँगै कृषकहरु धान रोपाईँमा व्यस्त छन् । बुधबारबाट भने अझै बढी वर्षा भएपछि कृषकलाई धान रोपाई गर्न भ्याईनभ्याई छ । मोरङ धान उत्पादन हुने मुख्य जिल्ला भित्र पर्छ । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ६ मा धान रोप्नलाई ठिक्क पारिएको खेतको ड्रोनबाट लिएका तस्विरहरु । […]
प्रदेश १ मा १८ प्रतिशत हुँदा मोरङमा १२ प्रतिशत रोपाईँ
विराटनगर । आज असार १५ मोरङका कृषकहरु धान रोपाईँमा व्यस्त छन् । मंगलबार सम्ममा मोरङमा १२ प्रतिशत धान रोपाइ भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश १ विराटनगरका अनुसार मोरङमा ८३ हजार ३ सय हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रफल मध्ये ९ हजार ९ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाईँ भएको हो । आज विभिन्न स्थानमा […]